Kufambidzana Franchise Yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Kufambidzana Franchise
Featured Kufambidzana Franchises
Kupfimbana Kwekupedzisira Franchises
Kwemakore achangopfuura, kufambidzana uye kuita zvemitambo pamhepo kwave kuita kwakakurumbira. Neizvi, kukura kwekufambidzana mikana yekufambidzana yakawedzera kukwira.
Kune yakakura mikana yekufambidzana uye yekufambidzana ine hukama nemikana yekutengesa mikana yekutengesa. Mamwe acho anosanganisira:
Mechi kugadzira franchise kupa kuronga kwemichato uye hukama pakati pevanhu kuburikidza nezvinhu zvakasiyana siyana zvinokodzera.
Kana iwe uchifarira kushanda nevanhu uye uchifarira zvekupa iyo yakanakisa basa revatengi, ipapo kufambidzana franchise kunogona kuve kwako.
Senge kufambidzana franchisee, iwe nechikwata chako muchange muchishanda nevanhu zvakanyanya padhuze kuti muone kuti mutambo unogadzirwa waitwa. Mushure mezvose, iwe uchave uchibata nechinhu chinoshungurudza uye chakakomba chehupenyu hwevanhu.
Kufambidzana Franchise Kubatsira
Imwe yemubatsiro weiyo kufambidzana franchise ndeyekuti iwe uri mubhizinesi iwe pachako, asi kwete iwe wega. Kana iwe uchida kumhanyisa bhizinesi rako iro rinopa mubayiro uye richikwanisa kuti iwe uende kumba pakupera kwezuva uchiziva kuti wakaita hunhu hwakanaka muhupenyu hwevamwe vanhu, ipapo kufambidzana nehurombo kunogona kuve kwako.
Bhurawuza kuburikidza nevakawanda vakasiyana kufambidzana franchise mikana iri muFranciseek kufambidzana uye mechi yekugadzira franchise dhairekitori pazasi.